Murashax Xasan Sheekh oo ka digay in la dhinac maro qoontada haweenka
Updated About:321 days ago 0
Murashax Xasan Sheekh Maxmuud ahna Gudoomiyaha Xisbiga Nabadda iyo Horumarka ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho isagoona ka hadlay howlaha Gudiga Farsamadda , Odayaasha Dhaqanka iyo Koontada Haweenka ee Xildhibaanada cusub.
Muarshaxa oo marka hore ka hadlay howlaha socday ayaa sheegay in markii horaba Xisbiga Nabadda iyo Horumarka uu cadeeyey in qaabka ay wax u socdaan uusan ahayn mid qurux badan islamarkaana lagu kalsoonaan Karin hayeeshee waxauu tilmaamay in xaaladda haatan uu dalka ku jira ay ka sii liidato.
”Anaga dabcan horaan u sheegnay process-kaan ma quruxbadna si fiicana looma sameeyn laakin hadda marxaladda aan ku sugan nahay ayaa wax walba ka liidata, marka anaga hore ayaan go’aan ku gaarnay in uu socdo process-ka si xaaladaan looga gudbo sidaas ayaanu ku taageernay ” ayuu yiri Murashax Xasan Sheekh.
Murashaxa oo ka hadlay qaabka xulista xildhibaanadda cusub ayaa tilmaamay in ay jiraan dhibaatooyin horyaala Odayaasha dhaqanka ee ku howlaan soo xulista Baarlmaanka cusub ee Soomaaliya.
“ Waxaa iyagu laftigooda loo diidan yahay soo xulis xildhibaanada tii oo ay dheertay in marti qaadyo loo sameeynayo taas oo sameeyn ku yeelaneeysa in xildhibaano sax ah soo baxaan, waxaa jirta in Odayaasha qaar aysan xur u ahayn in ay soo xulaan xildhibaanadda” ayuu yiri Murashaxa Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkiisa jaraa’id sidoo kale uga hadlay guddiga farsamadda soo xulista ((technical selection committee) isagoona ku tilmaamay in ay yihiin dadkii loo baahnaa islamarkaana qibrad u leh arrimaha loo wakiishay hayeeshee waxa sheegay in ay jiraan mashaakilaad waa weyn oo lagu hayo.
“ wiilaal iyo gabdho Soomaaliyeed oo waayo aragnimo leh ayaa soo xulay gudiga farsamadda soo xulista baarlmaanka laakin waxaa heysta mashaakilaad waa weyn, tusaale ahaan , ma jirin hab raac la siiyey gudiga fursadna looma siin mid iyagu ay sameeystaan, waxaa dhacay in xubin gudiga ka mid ah in nin xildhibaan doon ah inta foomkii ka soo qaadeen iyagu si toos ah ay ugu dhiibaan guddiga farsamadda, arrinkaasina waa qalad” ayuu yiri Murashax Xasan Sheekh.
Waxa uu hadalkiisa raaciyey “ waxaan araknay warqado Ugaas uu soo saxiixay qaarna la qabtay qaarna la diiday aniga ma garanayo waxa ay arrinkaasi kala socdaan Guddiga farsamadda, waxaa kaloo dhacday in nin xildhibaan doon ah si toos ah foomka ugu geeystay Guddiga farsamadda “ayuu yiri Murashax Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay Gudigga Farsamadda iyo beesha caalamka in ay hubiyaan in Beel walba ay u dhan tahay ragga ka mid noqon doona Xildhibaanadda cusub islamarkaana ay u fiiro lahaadaan si ay uga hortgaan wax walba oo isdaba marin ah maadaama masiirka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin.
Ugu dambeeyntii Murashax Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed in ay meel saaraan kootaddii baarlmaanka ay ku lahaayeen haweenka Soomaaliyeed islamarkaana guddiga farsamadduna ay hubiyaan qoontada haweenka.
“Gabdhaha Soomaaliyee xaqbeey u leeyihiin waana la garanayaan wax tarkooda marka waa in la ilaalaiyaa kootadii haweenka ee ahayd 30% waa lagu heshiisyey anagu ka mid ma ahayn dadkii ku heshiiyey laakin waa in la fuiliyaa waxii lagu heshiiyey haweenkuna la siiyaa xaqooda”ayuu yiri Murashax Prof: Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah Murashaxiinta ugu cad cad ee u taagan qabashadda xilka Madaxweynenimadda ee Soomaaliya ee la filayo in lagu doorto 20 bisha Agoosto magaalada Muqdisho.